Kungani Icebo Lakho Lokuxhumana Nawe Likwehluleka | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Okthoba 8, 2010 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Kuleli sonto bengikhona Abenzi bezobuchwepheshe, umcimbi omuhle wokuxhumana wesifunda ohlanganisa isipikha esihle olandelwa ukuxhumana okusebenzayo nochwepheshe bezobuchwepheshe esifundeni. Isikhulumi kuleli sonto kwakunguTony Scelzo, umsunguli we Abenzi bemvula - inhlangano yabazali kubakhiqizi.
Mina noTony sabelana ngentshiseko ngezingosi zethu - ezakhe ezingaxhunyiwe ku-inthanethi nezami eziku-inthanethi. Ukwazile ukwakha inethiwekhi emangalisayo yamalungu angaphezu kwe-1,700 lapha esifundeni futhi manje uyanda ezweni lonke. Ngizizwa sengathi ngakhe inethiwekhi engakholeki ku-inthanethi… kepha ngiyaqhubeka nokufunda ithoni ngokuxhumana noTony.
Enye yezikhiye zokwethulwa kukaTony yilokho Ama-80% wamakhasimende akho amasha ngeke ivele kunethiwekhi yakho esheshayo. Baningi kakhulu abantu abajoyina amanethiwekhi futhi bahambela izingqungquthela noma imicimbi benethemba lokushiya nenqwaba yamakhadi alindelekile. Iqiniso ngukuthi ukuxhumana ngenethiwekhi kudinga amasu angaphezu kwelilodwa - uTony uwahlukanisile aba amane:
Amasu amane wenethiwekhi
Ukhetho Lokudla - uxhumekile nabanye ochwepheshe abasebenzela izethameli ezifanayo? Okwethu agency, Ochwepheshe be-IT, abameli, ama-accountants, abatshalizimali, njll abanye bakhona ochungechungeni lokudla. Ngidinga ukuqhubeka nokuxhumana nalabo bantu ukuze bakwazi ukudlulisela amaklayenti enhlanganweni yethu.
Izenzakalo - uyazi ngezenzakalo ezenzeka ngaphakathi enhlanganweni ezibanga isikhala lapho umkhiqizo noma insizakalo yakho ingagcwalisa khona? Kwi-ejensi yethu, umcimbi namakhasimende ethu amathathu abalulekile kube yiChief Marketing Officer entsha noma i-VP of Marketing. Kumele sazi lapho ukumaketha kushintshana ngezandla ezinkampanini ukuze sibe khona ukusiza ubuholi obusha.
Umthelela / Umenzi wesinqumo - obani abathonya? Kwesinye isikhathi kungumnikazi webhizinisi kepha kaningi kunabantu abasebenza ngaphakathi kweminyango abanethonya elikhulu ekuthengeni kwangaphandle kwenkampani noma ekuqashweni. Kithina, laba kungaba ngonjiniyela, onjiniyela bokuthengisa noma ama-CEO's. Kubalulekile ukuthi sixhumane nalabo bantu ukuze sikwazi ukuthola isingeniso esifudumele sangaphakathi ngezikhathi ezithile.
UNiche - Cishe yonke inkampani ine-niche esebenza kahle ngaphakathi. Okwethu ubuchwepheshe neSoftware njengenhlangano Yezinsizakalo namafemu atshala imali kuzo. Ngoba i-ejensi yethu inokuhlangenwe nakho okuningi kwe-SaaS, siyaluqonda ulimi nokusebenza kwangaphakathi kwalezi zinkampani - ngakho-ke ikhono lethu lokwenza amasu alincishiswa ngokufunda imodeli yebhizinisi noma izinqubo zangaphakathi zalezo zinhlangano. Simane sishaye phansi ngonyawo.
Kunezenzo ezintathu ongazicela kunethiwekhi yakho - izingeniso, ukuthunyelwa nezincomo. Ngokuya ngobudlelwano bakho noxhumana naye oyinhloko, unganqikazi ukucela uhlobo olufanele… ngesincomo esivela kuphela kusixhumanisi esiqine kunazo zonke.
Njengoba ucabanga ngenethiwekhi yakho eku-inthanethi kanye nezithameli ezihlosiwe ofisa ukufinyelela kuzo, ingabe uyazicabangela lezi zixhumi zesibili? Kufanele ube njalo!
Izinkundla Zokuxhumana Zomphakathi
Okthoba 12, 2010 ngo-7: 19 AM
Okuthunyelwe okuhle, uDoug. Ukuxhumana ubuso nobuso kuyisayensi nobuciko. Isifinyezo semithombo emine yebhizinisi kaTony 'Scelzo singikhumbuza ukuthi ngaso sonke isikhathi ngidinga ukufuna:
-Obanye ochwepheshe ababiza amakhasimende afanayo engingawenza
-Izehlakalo ezidala ukuthi abathengi abangaba khona badinge izinsiza zami
-Abantu abathatha izinqumo zokusebenzisa imali ngezinsizakalo zami, kanye nabathonya bemboni - Lona unzima; imvamisa bangabantu abahluke ngokuphelele abakhuluma “ulimi” oluhluke ngokuphelele kunabasebenzisi bokugcina bezinsizakalo zami.
-Izinhlobo ezithile zezinkampani nabantu abakuleyo nzuzo bazuza kakhulu enkonzweni yami.
Lokhu kusobala, kepha akulula. Kepha ukusebenzisa le nethiwekhi ukuxhumana nobuso ngobuso kuyisihluthulelo sebhizinisi eliningi.
UJeffrey Gitomer uthi: zonke izinto zilingana, abantu bathenga kubantu ababathandayo. Zonke izinto zingalingani, abantu basathenga kubantu ababathandayo. Ubuchwepheshe bokumaketha, i-automation plus networking (ukuxhumana kwabantu) impumelelo elinganayo.
Okthoba 12, 2010 ngo-8: 34 AM
Kuhle Funda! Kuzwakala njengomhlangano wethu wokuthengisa esibe nawo ngesonto eledlule. 🙂